Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabka oo la kala diray – Kalfadhi
Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Shacabka, Cabdiwali Ibraahim Sh. Muudey, ayaa kala diray Guddiga Miisaaniyadda, Maaliyadda, Qorsheynta iyo La-xisaabtanka Hay’adaha Dowladda ee Golaha Shacabka. Warqad ku taariikheysan maanta, oo uu soo saaray Guddoomiye Muudey, ayaa lagu qoray sababaha kala dirka Guddigaas.
Muudey waxa uu sheegay in, baaritaan uu Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad uu ku sameeyey Guddigaas kadib, ay nataajidiisu keentay inuu u arko in la kala diro Guddigaas. Sidoo kale, waxa uu Muudey sheegay in sababaha kala diridda Guddiga ay ka dambeysay markii uu Xoghayaha Guud ee Golaha ka helay xogta Hab-Raaca War-bixin Maaliyadeedka Dowladda, taas oo uusan Muudey ku xusin warqadda waxay ahayd.
Markii uu Guddiga Miisaaniyadda iyo Maaliyaddu ku kala qeybsamay War-bixinta Miisaaniyadda 2018 kulankii Golaha Shacabka ee Sabtidii, “waxay keentay” buu yiri Guddoomiye Muudey “inuu kala diro Guddigaas. “Qilaafkaas Guddiga oo gaaray heerkii ugu xumaa” ayuu yiri Muudey “waxay, sidoo kale, keentay in la kala diro Guddigaas.
Sida ku cad warqadda lagu kala diray Guddigaas, waxa uu Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha kala tashaday go’aankaas Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, iyada oo lagu xusay waraqadda in la ogeysiiyey Kuxigeenka 2-aad ee Golaha, Mahad Cabdalla Cawad iyo Xoghaynta Golaha Shacabka.
Guddoomiye Cabdiwali Muudey waxa uu sheegay inuu Guddiga Joogtada ee Golaha Shacabka si degdeg ah u soo magacaabayo guddi cusub, oo buuxiya kaalintii guddiga uu kala diray. Hase ahaatee, warkaan waxa uu imaanayaa iyada oo ay ugu yaraan 20 Xildhibaan ku doodayeen Isniintii in ay Shir-guddoonka Goluhu kala shaqeeyeen Xukumadda in la kala qeybiyo Guddiga Maaliyadda, War-bixin Miisaaniyadeedkii 2018-ka ee uu saaray kadib.
War-bixintaas waxaa laalay Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha, Mahad Cabdalla Cawad, isaga oo raali-gelin ka siiyey Wasaaradda Maaliyadda oo ay war-bixintu ku eedeeneysay iney si aan sharci ahayn ula macaamishay Miisaaniyadda 2018-ka. Balse, Xildhibaanada qaar waxay qabaan inuusan go’aankaasi sharci ahayn.
Halkan ka akhirso warqadda kala dirista.